ဘယ်နေရာမှာမဆိုမိုဘိုင်းကစားတဲ့ Play, အချိန်မရွေး! – အခမဲ့£5အပိုဆု Get
အားလုံးအန်းဒရွိုက်မိုဘိုင်းဟန်းဆက်များကဲ့သို့လောင်းကစားရုံဂိမ်းအထောက်အကူနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်နေကြ မိုဘိုင်းကစားတဲ့. တူလည်းတစ်မူကွဲ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကုန်သည်ကစားတဲ့ ကစားသမားအကြားအကျိုးစီးပွားမြင့်မားသည့်အဆင့် garners နှင့်ထိန်းသိမ်းထားမသာ, ဒါပေမယ့်လည်းနဂိုအတိုင်းအလောင်းကစားရုံအိမ်သူအိမ်သားသို့မဟုတ်လောင်းကစားရုံလျှောက်လွှာများနှင့် website ကိုမှာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုစောင့်ရှောက်.
Coinfalls ကာစီနိုထိုအကြီးမားသောဝင်းမှာအကောင်းဆုံးလောင်းကစားအတွေ့အကြုံ Get – ယခုဝင်မည်!
ရယူ 100% အပိုဆုပွဲစဉ် Up ကို£ 200 စေရန် + သောကြာနေ့တွင်£ 25 အပ်နှံအပိုဆုရန် Up ကိုဖမ်းပြီး
Coinfalls ကာစီနိုမိုဘိုင်းကစားတဲ့အားသာချက်တစ်ခုအရေအတွက်ရှိသည်. တကယ်တော့, သူတို့ကစားသမားတစ်ဦးရှည်လျားသောစာရင်းသို့မဟုတ်အကျိုးခံစားခွင့်တစ်ခုခင်းကျင်းရှိ, ဂိမ်းကစားနိူး, အပျော်တမ်းလောင်းကစားရုံကစားသမား, အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောလောင်းကစားသမားတွေ, ဝါရင့်လောင်းကစားရုံကစားသမား, ကစားတဲ့ကျွမ်းကျင်သူများကစသည်တို့ကို.
Facebook ကဲ့သို့လူမှုမီဒီယာကွန်ရက်များမှတဆင့်, ကစားတဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကစားသမားများနှင့်အတူ ချိတ်ဆက်. နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများမှတဆင့်အွန်လိုင်း multiplayer ကစားတဲ့ကစားနိုင်ပါတယ်. ထို့အပြင်, အလွန်နည်းပါး compatibility ကိစ္စများရှိပါသည်.
ဒါပေမယ့်ပင်ဒီဂိမ်းကိုကစားနိုင်ရန်အတွက်တစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာတစ်ခုသို့မဟုတ် Laptop ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့လိုအပျနေတဲ့ကစားသမားများကဲ့သို့အချို့သောကန့်သတ်ခဲ့. လည်း, အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ရှိသည်နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲကို download လုပ်ဖို့လိုအပျဖို့လိုအပျကစားသမားတွေဂိမ်းခံစားနိုင်ရန်အတွက်.
အချို့သောနှစ်ကြာပြီးနောက်, မိုဘိုင်းဂိမ်းအယူအဆစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်. ဒီအယူအဆကြောင့်မိုဘိုင်းဟန်းဆက်များ၏ဝါးမြိုခြင်းနှင့်အန်းဒရွိုက်စနစ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးနှင့်တွန်းအားတယ်. အဆိုပါ အန်းဒရွိုက်မိုဘိုင်းစနစ်များ နှင့် Android မိုဘိုင်းဟန်းဆက်များလှပလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူဤအလောင်းကစားရုံဂိမ်းထဲ.
ဘယ်နေရာမှာမဆိုမဆိုဖုန်းများအတွက်ခုနှစ်တွင် မှစ. Coinfalls ကာစီနို Play
ဒီနေ့မိုဘိုင်းကစားတဲ့တူ Coinfalls ကာစီနိုဂိမ်းများကိုတစ်ဦးချင်း၏မိုဘိုင်းဖုန်းမှကစားနိုင်ပါတယ်. အလားတူပင်, အမျိုးမျိုးသော Modes သာမိုဘိုင်းဂိမ်းအမျိုးအစားအောက်တွင်တည်ရှိ. သူတို့ထဲကတချို့ကများမှာ